Mubvunzo wako: Unobika mazai kwenguva yakareba zvakadii pamusoro pepakati? - Ndiri kubika
Encyclopedia yehunyanzvi hwekugadzira
Mubvunzo wako: Unobika mazai kwenguva yakareba zvakadii pamusoro pepakati?
Unobika sei pamusoro pemazai ari pakati?
Ndinofanira here kubika mazai pamhepo iri pakati?
Inguva yakareba sei iwe yaunofanirwa kubika pamusoro peiri nyore mazai?
Unogona here kutora salmonella kubva pamusoro epakati mazai?
Ndeupi musiyano uripakati peanyore uye epakati nepakati mazai?
Iwe unofuratira pamusoro pepakati mazai?
Ndeupi mutemo unonyanya kukosha mune yekubika mazai?
Unobika mazai pakudziya kukuru here?
Unobika sei mazai usina kuabhedhenura?
Iwe unofanirwa kupuruzira mazai?
Zvinorevei kana iwe ukawana mairi maviri muzai rimwe?
Zuva rakasviba kumusoro mazai akachengeteka here?
Mazai akakangwa ane hutano here?
Uchishandisa spatula yakatetepa, svetuka zvinyoro pasi pezai uye flip. Iwe haufanire kuitora iyo yese nzira pasi, asi ita shuwa kuti iri pasi peiyo yolk usati wabaya. Rega kubikira kweinenge imwe miniti yekuwedzera-nyore, maminetsi maviri kwepakati nepakati uye zvichingodaro. Flip zvakare uye ushande ipapo.
Muchidimbu chisina kumira pamusoro pemhepo inopisa, nyungudutsa mafuta (kana kupisa mafuta). Kanda zai mupani. Pheka maminitsi matatu, kana kusvika chena yaiswa. Flip uye gadzira maminetsi maviri kusvika matatu zvekare, kusvikira yolk yaiswa zvishoma.
Preheat pani pamusoro pekupisa kwepakati, asi usapenga zvakanyanya nemurazvo kana nguva yasvika yekuti unyatso kubika mazai. "Mazai akapwanywa anofanira kubikwa zvishoma nezvishoma, pamusoro pemhepo iri pakati," anotsanangura kudaro Perry. "Kukakavara kwakanaka kunotora miniti!" Enda unopisa, uye uchave uine akawandisa mazai.
Mwaka ne 1 pini yemunyu we kosher uye 1 gaya mhiripiri nhema uye bika, uchiri pamusoro pemoto wakadzika, kwemaminitsi 1 kusvika ku11 / 2. Jiggle zvakare uye ongorora vachena kuti vasaone; kana iwo akanyatsogadzika asi asina kuoma, inguva yeku flip.
ZVINONAKIDZA: What can you grill on cedar planks?
Kana iro zai rakasanganiswa nemamwe mazai mazhinji, risina kunyatso kubikwa, kana kubatwa pane tembiricha inodziya ichibvumira utachiona hweSalmonella kuti huwande, zvinogona kurwarisa vanhu vazhinji. Hutachiona, Salmonella Enteritidis, hunogona kunge huri mukati memazai akajairwa, uye kana mazai akadyiwa mbishi kana asina kubikwa, hutachiona hunogona kukonzera kurwara.
Kupfuura nyore: Izai rakapetwa uye kubikwa kwemasekondi mashoma kwenguva yakareba, yakakwana kuzadza vachena asi asiya iyo yolk yakazara runny. … Pakati pepakati: Ino nguva, yakabikwa zai inobika kweminiti kana maviri, yakareba zvakakwana kuti igadzire iyo yolk asi ichisiye yakashapa (asi isina kuonda uye inomhanya).
Sunny side kumusoro: Zai rakakangwa neiyo yolk kumusoro uye haribatwe. … Pakati pepakati: Zai rakapetwa uye iyo yolk inongomhanya zvishoma. Pamusoro pazvo: Zai rakapetwa uye iyo yolk yakabikwa zvakaoma.
GENERAL YOKUBIKA MAZANO MAZANO OKUBIKIRA MAZANO  Mutemo unonyanya kukosha wekubika mazai ndiwoMutemo wakanyanya kukosha wekubika mazai uri nyore: Dzivisa kudziya kwakanyanya uye kureba kwenguva refu: Dzivisa kupisa kwakanyanya uye nguva refu yekubika. usanyanyisa.
Pane zvakawanda zvingangopunzika kana zvasvika pakugadzirira mazai ako. … Ita kufamba kusiri iko, uye mazai ako anogona kubuda asina kunaka, anodonha, akadhakwa, rubbery - neimwe nzira, zvese kamwechete.
ZVINONAKIDZA: You asked: Do you grill hamburgers with the lid open or closed?
Sunny-Side Kumusoro Mazai
Rudzi rwezai rakakangwa rinowana zita raro nekuti inopenya yero yolk inopenya zvakajeka pamusoro. Yakabikwa zvakapfupika pamusoro pemurazvo zvine mwero kuti unyatsoisa machena uye yakafukidzwa iyo nguva yese. Iyi nzira yekubika inoteya chiutsi, icho chinobika pamusoro pezai pasina kupidiguka.
3 Flip Zai
Flip zai zvinyoro nyoro kuti usatyora yolk. Kana iwe uri kubika anopfuura rimwe chete zai, flip rimwe nerimwe zai rimwe panguva. … Kana uchida yolk yakasimba, bika kwemasekonzi 60-90. Kamwe kana zai rako rabika nekuda kwako kwaunopa, shandisa iyo spatula kuti ubvise zvinyoro kubva pa skillet uye tumira yakananga kune ndiro.
Kana iwe uri munhu anotenda mashura, kutora zai nekaviri yolk zvinogona kuratidza kuti iwe kana mukadzi wako shamwari uchave nepamuviri nemapatya. Kana, kana iwe ukanyorera kuNorse mythology, zvinoreva kuti mumwe munhu mumhuri yako ari kuzofa. Asi zvakanyanya zvinongoreva kuti uchave uine yolkier omelet.
Mazai: unogona kuvada zuva richikwidza kumusoro kana kupfuura nyore, asi zvakachengeteka kudya mazai akabikwa zvakanaka. Nhasi mamwe asina kuvhurika, akachena, matsva mazai emazai anogona kunge aine Salmonella mabhakitiriya anogona kukonzera chirwere chekudya. Kuti ave akachengeteka, mazai anofanirwa kubatwa zvakanaka, kuiswa mufiriji uye kubikwa.
Frying mazai ndeyekare. Kunyangwe iwe uchivada pamusoro pezviri nyore (zvakabikwa pamativi ese maviri), zuva rinosimuka kumusoro (rakagochwa kune rimwe divi) kana kukwikwidzwa (kusvetwa mumudziyo), vanogona kuve kuwedzera kune hutano kune chako chakazara chikafu.
ZVINONAKIDZA: Ndinofanira here kuisa grill yangu nefiripi?
Kutora kunze 0
Iwe unotora nguva yakareba sei grill knockwurst?
Preheat grill kusvika pakati (kana uri kushandisa charcoal grill, marasha ari
Iwe wakabvunza: Unogona kubika turkey burgers yepakati?
Turkey Burgers inokodzera muchikwata chehuku uye saka inoda kuzara yakabikwa
Unobika sei hove mumoto?
Unobika hove pamoto kusvika rinhi? Nama chikwama chefoil,
Mhinduro Inokurumidza: Iwe unoita sei grill yepamusoro sirloin yepakati isingawanzo?
Kune yakakwana yepakati-kashoma yepamusoro sirloin steak, grill kwemaminetsi 9-12 ye1-inch.
Iwe unobika sei bhakoni pasi pegrill?
Iwe unobika kwenguva yakareba sei bhakoni pasi pegrill? Pisa grill kune yayo
Mubvunzo wako: Unofanira mwaka kukanda simbi grill grates?
Usati wabika pamarata akakandwa kwekutanga, unofanira kugeza
Mhoroi, ini ndiri Anna. Chandinofarira kuita kubika, uye pane ino blog ndinotora zvinhu zvakasiyana siyana nezvekubika. Technologies, manomano, nuances - kujoina, zvichave zvinonakidza!
Nei kutsvaira mazai muhotera zvisina hutano?
Quick Answer: How do you grill cheddar beddar?
Kubikira dehenya deer kunonhuhwa here?
Mhinduro yakanakisa: Kangani grill inofanira kucheneswa Mcdonalds?
Marasha anofanirwa KUKUVA usati wabika here?
Unogona kubika nyama mbishi paGeorge Foreman grill?
© 2021 Ndiri kubika